တေးဂီတကိုတင်ရန်ဂီတပလက်ဖောင်းသစ်: Sounders Music | Androidsis
Sounders Music သည်တေးဂီတအနုပညာရှင်အသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် app အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
တေးဂီတသည်အလွန်ရဲရင့်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Spotify, Apple Music နှင့်အခြားသူများမှပြည့်လျှံနေသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအနုပညာရှင်အသစ်တွေနဲ့အနည်းငယ်ကွဲပြားတဲ့နည်းနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးလို့ပါလို့ပြောရဲပါတယ်။
ဆိုလိုတာကသွားကြကုန်အံ့ ဂီတ 0-5 ရမှတ်ပေးခြင်း ငါတို့ရဲ့ဂီတအရသာကိုဖန်တီးဖို့ငါတို့ကိုတင်ပြနေတယ်၊ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်ငါတို့၏အရသာနှင့်အညီပိုမိုသောသီချင်းအသစ်များကိုအကြံပြုနိုင်လိမ့်မည်ကိုနားလည်သည်။
2 Sounders ဂီတတွင်အနုပညာရှင်အသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ
Sounders ဂီတ၏စိတ်ကူးသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂီတကိုတင်ပါ ဒါဆိုရင်သူတို့ကမင်းရဲ့အရည်အချင်းကိုဂီတဖွဲ့စည်းမှုနဲ့သိကျွမ်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားအတွေးအခေါ်များနှင့်ပါ ၀ င်သော streaming app တစ်ခုဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ app ကိုစတင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ကို0မှ5အထိနှိပ်နိုင်သော interface တစ်ခု၏ရှေ့တွင်ထား၏ ငါတို့ဘယ်လောက်အထိမြည်တာလဲ။ ရမှတ် ၅ မှတ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ၄ ခု၊ ၃ အတွက်က ၃၊ ပုံမှန် ၂ အတွက် ၂ ရတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရအောင်လုပ်မယ်။5ကမုန်းတယ်။
ဤနည်းဖြင့်သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ချင်းစီမှဂိုးသွင်းနိုင်ပြီး Sounders ဂီတသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရသာကိုမှန်းဆနိုင်သည်။ ထွက်ရှိသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာမသိပါ မူပိုင်ခွင့်ရထားသောဂီတ၏မျိုးပွားမှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သင်သည်ဂီတအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ကောင်းမွန်သောအိမ်ခန်းတစ်ခုရှာတွေ့လိမ့်မည်။
တေးဂီတနောက်မှ ငါတို့မှာရှိတဲ့ဂီတအရသာအကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်သိပါရစေ၎င်းသည်တေးသီချင်းအသစ်ရှာရန်ကဒ်အချို့ကိုရွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ အမှန်မှာ၊ တူညီသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလူသိများစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သီချင်းများကိုတင်နိုင်သည်ဟုယူဆသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ streaming များအတွက်ဂီတအမျိုးအစားကိုညွှန်ပြ ငါတို့သီချင်းတွေကြိုက်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နောက်လိုက်တွေကိုအသံထွက်အောင်လုပ်ပါ။ တေးဂီတကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတစ် ဦး ဦး အားအသံမြည်ရန်စန္ဒယားတီးခြင်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ မင်းဘယ်တော့မှမသိဘူး ...
ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ရမယ် beta state ရှိ app တစ်ခုထို့ကြောင့်၎င်းကိုအသုံးချလိုသောအနုပညာရှင်အသစ်များကိုကြိုဆိုရန်လိုသေးသည်။ သို့သော် TikTok သည်ဤအဖြစ်အပျက်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးသင်ကျန်ရှိသောဇာတ်လမ်းကိုကောင်းစွာသိပြီးဖြစ်သည်။
အခုအချိန်မှာ ဒီ app ကလုံးဝမကောင်းဘူး။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ interface တစ်ခုရှိတယ် သီချင်းတွေအကုန်လုံးရပြီးတဲ့နောက်အနုပညာရှင်အသစ်တွေသိကျွမ်းဖို့ကဒ်ပြားအမျိုးမျိုးကိုရွေးပါ။ Mozart နှင့်အခြားဂန္ထဝင်များ၏ဂီတရေးစပ်သီကုံးမှုများကိုရုတ်တရက်တွေ့ရှိရသည့်အတွက်ပြသနာသည်ထိုသီချင်းများ၏ဂီတအရည်အသွေးတွင်ပိုဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ Sounders ဂီတ၏စီးဆင်းမှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်လက်ရှိအချိန်တွင်အနုပညာရှင်များစွာမများသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နားထောင်လိုသည့်သီချင်းများလည်းမရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့0မှတ်ပေးဖို့တခြားဖုန်းကိုသွားပြီးဖုန်းခေါ်ကြည့်မယ်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်စီမံကိန်းသို့မဟုတ်လအနည်းငယ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်၎င်းသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည်။
ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းပြုလုပ်ပါ ကျနော်တို့အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်သည့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းကိုအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းပလက်ဖောင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်နှင့်အသုံးပြုသူများအားခြစ်ရာချရန်အလွန်ခက်ခဲသော ကျွန်ုပ်တို့သည် Spotify သို့မဟုတ် Apple Music အကြောင်းပြောဆိုရုံသာမက ဒါပေမယ့် Soundcloud ကနေ.
အသံတေးဂီတသည်၎င်းကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ ထို့အပြင်သင်၏ streaming model သည်လူအများစုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဇွဲရှိမှုနှင့်သည်းခံမှုပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။
ရေးသားသူ: NoticeSound BV
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အခမဲ့ဂီတ » Sounders Music သည်တေးဂီတအနုပညာရှင်အသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် app အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
မင်းငါ့ကိုပြောမယ် အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ !!
သင်၏ဖန်သားပြင်ကို Google Duo တွင်မျှဝေနည်း
Xiaomi Mi 10T Lite သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်း၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်စျေးနှုန်း